Dowladda Maleysia oo ka hadashay kiiska muwaadin u dhashay dalkaas oo lagu xiray Soomaaliya - Radio Risaala: Somali News Online
Home Caalamka Dowladda Maleysia oo ka hadashay kiiska muwaadin u dhashay dalkaas oo lagu...
Dowladda Maleysia oo ka hadashay kiiska muwaadin u dhashay dalkaas oo lagu xiray Soomaaliya
Wasaaradda arrimaha dibedda dowladda Maleysia ayaa sheegtay inay si dhow ula socota xarigga iyo hannaanka sharciga ah ee loo maray nin u dhashay Malaysia oo la sheegay inuu Soomaaliya u soo galay si uu uga qeybqaato howlaha ay wadaan Al-Shabaab, kaas oo Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida ay dhageysiga dacwadiisa billowday.
Wasiirka Arrimaha dibadda Maleysia Datuk Saifuddin Abdullah ayaa wuxuu sheegay in mas’uuliyiinta Safaaradda Malaysia ee Khartuum, Sudan, ay koox usoo dirtay Muqdisho si ay u eegaan bad-qabka caafimaad iyo hanaanka sharci ee loo maray xariga Axmed Mustakim Abdul Hamid.
“Wasaaraddu waxay sii wadi doontaa la socodka dhacdooyinka kiiska waxayna siin doontaa kaalmada lagama maarmaanka ah iyada oo hubineysa in mar walba la ilaaliyo xuquuqdiisa iyo samafalkiisa iyo inuu helo xukun caddaalad ah oo waafaqsan sharciga.
“Waa inaan ixtiraamnaa shuruucda dalka, waxaana laga yaabaa inaan weyddiisanno wakiillada safaaraddeenna inay ka soo qaybgalaan dacwadiisa maxkamadeed,” ayuu ku yiri shir jaraa’id oo uu ku qabtay Xarunta Adeegga Baarlamaanka ee Indera Mahkota.
Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer oo hore waxaa ay xukuno kala duwan ku riday Rag Ajaanib ah oo la Shaqeeynayay Al-Shabaab & Kooxda Daacish-ta Soomaaliya.
Previous articleAl-Shabaab oo qaraxyo ku burburiyay Garoonka diyaaradaha degmada Buulo-Burde
Next articleMadaxweynaha Koonfur Galbeed oo Safiirka Itoobiya kala hadlay Amniga doorashooyinka